musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA: Kudiwa kwekufamba kwakaratidza kunatsiridza kumahombekombe muna Chivabvu
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvinosuwisa kuti hurumende zhinji hadzisi kufamba nekukurumidza kuti dzishandise dhata kutyaira nzira dzekuvhura muganho dzinogona kubatsira kumutsiridza mabasa ekushanya nekubatanidza mhuri.
Chose chinodiwa chekufamba nendege muna Chivabvu 2021 chakadzikira 62.7% zvichienzaniswa naMay 2019.
Vanodaidzira mutyairi wepasi rose muna Chivabvu aive 85.1% pazasi paMay 2019.
Yese yekudiwa kwemudzimba yakaderera 23.9% maringe pre-dambudziko mazinga, zvishoma zvakagadziridzwa kupfuura Kubvumbi 2021
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa kuti mafambiro epasi rese neepamba anoratidza kuvandudzwa kwemahara muna Chivabvu 2021, zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura, asi traffic yakaramba iri pazasi pehutachiona hwehutachiona. Kudzoreredza mumigwagwa yepasirese kunyanya yakaramba ichiteedzerwa nemitemo yakawanda yehurumende yekufamba.
Nekuti kuenzanisa pakati pe2021 ne2020 pamhedzisiro mhedzisiro kunokanganiswa neyakajairika mhedzisiro yeCOVID-19, kunze kwekunge zvataurwa zvimwe kuenzanisa kuri kwaMay 2019, iyo yakatevera yakajairika dhizaini pateni.
Chose chinodiwa chekufamba nendege muna Chivabvu 2021 (chakayerwa mumari yemakiromita emitero kana maRPKs) chakadzikira 62.7% zvichienzaniswa naMay 2019. Icho chaive pfuma pamusoro pe65.2% kuderera kwakanyorwa muna Kubvumbi 2021 maringe naApril 2019.
Vanodaidzira mutyairi wepasi rose muna Chivabvu aive 85.1% pazasi paMay 2019, nhanho diki-kubva kumusoro kubva pa 87.2% kuderera kwakanyorwa muna Kubvumbi 2021 maringe makore maviri apfuura. Matunhu ese kusara kweAsia-Pacific akabatsira mukuvandudzika kuderera uku.
Yese yekudiwa kwepamba yaive pasi 23.9% maringe pre-dambudziko mazinga (Chivabvu 2019), yakagadziridzwa zvishoma pamusoro paApril 2021, apo traffic yepamba yaive pasi 25.5% kutarisana nenguva ye2019. China neRussia traffic inoramba ichingova mune yakanaka kukura ndima ichienzaniswa ne pre-COVID-19 mazinga, nepo India neJapan vakaona kuora kwakakura pakati pemisiyano mitsva uye kuputika.
"Tiri kutanga kuona zviitiko zvakanaka, nemisika yepasi rose ichivhurira vafambi vanobayiwa majekiseni." Iyo yekuNorth Hemisphere yezhizha yekufamba mwaka yasvika zvino zvizere. Uye zvinosuwisa kuti hurumende zhinji hadzisi kufamba nekukurumidza kuti dzishandise dhata kuendesa nzira dzekuvhura muganho dzinobatsira kumutsiridza mabasa ekushanya nekubatanidza mhuri, "akadaro Willie Walsh, Director General weIATA.